Aluminium Ukunyibilika Iziko lesinyithi, Arc Aasa, oluzenzekelayo nasekuqiniseni - Rongtai
Umenzi kobungcali Ubushushu Izixhobo Products phantse 22 iminyaka. Efektri yethu ibekwe WeifangCity, Shandong. Funda ngokugqithisileyo
Factory yethu ikhule ibe iNkulumbuso ISO9001: 2008 umenzi eziqinisekisiweyo yobunjani ephakamileyo, Ixabiso-Effective iimveliso. Funda ngokugqithisileyo
Soloko ibeka umgangatho kwindawo yokuqala liliso ngokungqongqo umgangatho imveliso le yonke inkqubo. Funda ngokugqithisileyo
Kweminyaka engama-22, Rongtai uye ugxininise ekuboneleleni MF izixhobo yoqheliso zokufudumeza oluzinzileyo kakuhle.
Shandong Rongtai Induction Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-1997, i ishishini subordinating eliphezulu-zobugcisa kazwelonke-kwihlabathi izixhobo obuphezulu manufacturer- Himile Group.
System olupholisa Water Valiwe
Induction Melting zomlilo Aluminium Shell zinyibilike ...
Oko We Yenza
INKUNDLA OF WORK
GO ukubambana ngezandla
Ukususela mhla yasekwa, Rongtai uwalandele kwindlela ezintsha zobuchwepheshe ozimeleyo kunye R & D. Kuye iqela top-hlengiso lweenotshi iitalente zobugcisa kolu shishino, kwaye ithe yamilisela ilebhu-kwinqanaba lephondo, iziko lobugcisa kwishishini-kwinqanaba lephondo, uphando zobunjineli-kwinqanaba likamasipala kunye neziko nophuhliso. Emele mgangatho MF induction technology apha ekhaya nakumazwe aphesheya, abathatha inxaxheba kuhlaziywe ii umgangatho kuzwelonke "National Industrial Electric Ubushushu Equipment yokubekwa mgangathweni mnye kweelwimi Technology", "Ubuninzi Medium Coreless Induction Aasa" yaye "Uhlobo Qaphela Frequency Conversion Multiple Frequency Medium Coreless Induction ezikweni Zalisa Cwangcisa "ukumiselwa kwemigangatho yokusebenzisa amandla bephosa emlilweni zombane.
Njengoko oluncedisayo eziphambili Himile Group, Rongtai Induction Technology ikomkhulu RMB million 10 ezibhalisiweyo. Ezi mveliso zimbini kugubungela ummandla uwonke 137.200 ㎡. Kukho 5 iindibano zale mihla kunye ummandla uwonke 46.000 square metres,-ofisi epheleleyo kunye izibonelelo ezixhasa. engundoqo imveliso Le nkampani izixhobo frequency yoqheliso eliphakathi kunye nokuxhasa izixhobo esizisebenzelayo kubandakanywa, iimveliso undoqo isiphelo ophezulu eziko induction yokunyibilika, oluzenzekelayo induction kufudumeze eziko, ucimayo intanethi kunye umgca wemveliso tempering, njl, ukukhonza amashishini amaninzi oomatshini lokuvelisa isiphelo lwetshiphu emsebenzi-ekhaya aphesheya.
Field amava emsebenzini kunye nobuchule hamba isandla-in-ngesandla
Ngo-2003-04, inkampani wafumana umyalelo Rhweba kubalulekile ukubonelela, ukufakwa, ukujongwa nokusebenza kunye nokulondolozwa Drum Mix leTela sisityalo Dushanbe, Republic of Tajikistan kuba kwiprojekthi yesikhululo senqwelo-moya.
A loSetyenziso ngempumelelo kunye nokuzaliswa kwale umyalelo bazisa ke wave entsha phambili kule nkampani.
Xa inkampani langoku besonwabela ithandwa enkulu eNigeria, Tajikistan, Kazakhstan, Papua New Guinea, Seychelles & Malawi ngenxa nemveliso ephakamileyo kakuhle nasemva yokuthengisa nenkxaso.
Ukunikezela ekuboneleleni umgangatho ophezulu kunye nezixhobo iindleko-olusebenzayo umgangatho MF yehlabathi kwimarike Chinese, yaye emele izixhobo eTshayina yoqheliso kulo ihlabathi, ukuba ekudidi lwehlabathi MF izixhobo umenzi.
Himile Group yasekwa ngo-1995, ise-Gaomi City, Shandong Blue Economic Zone. Iminyaka engaphezu kwama-20, le nkampani iye phambili ngokukhawuleza yaye ngokuthe ngcembe ngeqondo compound lokukhula ngonyaka ka phantse-50%. Ngoku has nkampani ngaphezulu kwama-30, kuquka enye A-share Inkampani ekuluhlu (ikhowudi stock 002595), ezine amashishini ophezulu zobugcisa yesizwe kunye neenkampani ezintlanu phesheya. Himile ithatha indawo ka-2.664.000 ㎡, iqeshe abantu abangaphezulu kwama-10,000 kwaye Linani RMB 7.6 billion. Oku kuthetha koomatshini mveliso, ubunjineli offshore, ukuba sendleleni kaloliwe, igesi, imfundo kunye nezinye iinkalo.
Melting Furnace Copper, Graphitization Furnace, Mini Melting Furnace, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Induction Metal Melting Oven, Ubushushu Treatment Induction zomlilo,